Yintoni enokubakho kuPhando lweOrganic? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 24, 2009 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Ngokuhlwanje bendinebhiya kunye nomhlobo olungileyo kunye nomntu endisebenza naye UKristian Andersen. Ifemu kaKristian sisibonelelo esingummangaliso sendawo kumashishini amaninzi kwingingqi nakwilizwe lonke kwaye uKristian ungumcebisi wabucala.
Yonke incoko endinayo kunye noKristian iyandomeleza-kwaye sicelomngeni ukuqonda komnye nomnye malunga nendlela elisebenza ngayo ishishini, iSoftware njengeNkonzo, ukuba isebenza njani imidiya yoluntu… uyifumana ingongoma!
Mna noKristian sixoxe ngokubhloga ngokuhlwanje kwaye inkampani yakhe yanelisekile liqonga kunye nesicwangciso abasisebenzisayo. Ayisiyokuba andicingi ukuba benza umsebenzi omkhulu- Iqela likaKristian libhala umxholo oncomekayo. Into endicele umngeni kuyo noKristian kukuba ingaba ibhlog iyadibana igcwele uphendlo lwezinto eziphilayo.
Ingavakala njengehoopla, kodwa ayisiyiyo. Ukuba ubhloga ngoku, uyazi njani ukuba iyasebenza? Kwicebo le-KA, ziinkokeli ezicingelwayo kuphawu lwentengiso, uyilo kunye nendawo yokuthengisa. Njani do ukulinganisa oko? Eyona nto ilula kakhulu.
I-Kristian Andersen + Associates luphawu loqeqesho oluninzi kunye namava okucebisa. Sinceda iinkampani ukuba zichaze, zichaze kwaye zenze izicwangciso zebrendi kunye namava omsebenzisi aqhuba impumelelo yexesha elide.
Benzisa Semrush, Ndichonge izithuba zebhlog ka-KA eziqhuba ukugcwala kwabantu, kunye namagama aphambili ebhlog afunyenweyo, inqanaba lamaphepha kwiziphumo, ukuhambelana kwetrafikhi yokuphanda, kunye nevolumu yenyanga yamagama aphambili / amabinzana ixesha:
umKristu (Inqanaba 6, Ukugcwala kuka-81.53%, uMqulu wokuKhangela: 170)
uKristian andersen (Inqanaba 1, Ukugcwala kuka-13.51%, uMqulu wokuKhangela: 91)
uKristian andersen (Inqanaba 2, Ukugcwala kuka-3.69%, uMqulu wokuKhangela: 12)
ixesha elifutshane kunye nexesha elide (Inqanaba 11, Ukugcwala kuka-0.63%, uMqulu wokuKhangela: 22)
ka a (Inqanaba 5, Ukugcwala kuka-0.18%, uMqulu wokuKhangela: 0)
ixesha elide kunye nexesha elifutshane (Inqanaba 8, Ukugcwala kuka-0.18%, uMqulu wokuKhangela: 140)
Iselfowuni yokufunda kuGoogle (Inqanaba 4, Ukugcwala kuka-0.09%, uMqulu wokuKhangela: 260)
wedolophu (Inqanaba 14, Ukugcwala kuka-0.09%, uMqulu wokuKhangela: 16)
ezahlukeneyo kwaye zininzi (Inqanaba 19, Ukugcwala kuka-0.09%, uMqulu wokuKhangela: 16)
indianapolis ibj (Inqanaba 18, Ukugcwala kuka-0%, uMqulu wokuKhangela: 390)
andersen entsha (Inqanaba 1, Ukugcwala kuka-0%, uMqulu wokuKhangela: 46)
Ke ngamawakawaka eenkokheli zeshishini ezijongela i-Intanethi iingcebiso kunye nobunkokeli ekubonisaneni nebranti, ingaba ibhlog kaKristian ifumana njani amandla kwesi sithuba? Umzamo owenziwa liqela likaKristian ekubhlogweni kunokuba kukuhlawulela ukwamkelwa ngabantu abakhuphisana nabo kunye nabathengi, kodwa andikholelwa ukuba kuyabhatala ukufumana ukuthembakala kunye negunya ngokubona amashishini esenza uphando kwiwebhu kanye kule yesibini!
Imbalwa yemiqathango yokuba ibhlog ye-KA ibekwe kwinqanaba leenethi malunga nokukhangelwa okungu-1,100 ngenyanga, kodwa ayisiyongxaki leyo. Umcimbi kukuba loo magama awadibani nento i-KA ebonelela abaphulaphuli bayo. Ikhangela ngokufanayo uyilo lophawu, Iindlela zokwenza uphawu, yaye Ukubonisana nebrand net ngaphezulu kwe-10k yokukhangela ngenyanga.
Umbuzo awukho nokuba unayo ibhlog enkulu, umbuzo ngowokuba ingaba ibhlog yakho iyafikelela kubukho bayo obupheleleyo. Ukwenza uhlalutyo lwamagama aphambili kwimigaqo abajolise kuyo abaphulaphuli baya kukubonelela ngezibalo ezithile malunga nokuba mangaphi la magama akhangelwe. Iya kubonelela ngebhlog yakho ngolwalathiso malunga nemigaqo oyisebenzisayo xa ubhala.
Phawula: UKristian undinike ilungelo lokushicilela esi sithuba - inkulu loo nto mfo! Ndicinga ukuba kukho itoni enokubakho kwibhlog yakhe kwaye ndiyathemba ukuba uqala ukucinga malunga nokubanakho ukufikelela kubantu phaya abafuna ulwalathiso kunye nobunkokeli bakhe!
tags: Ukubonisana nebrandIindlela zokwenza uphawuUkufaka uphawuyophando ngegama elingundoqouKristian anderseneziphilayouphando lwezinto eziphilayoEzinokwenzeka
Jun 24, 2009 ngo-1:20 AM
Molo, yintoni le nto ye-Amazon S3?
Ndijonge ukugcina umxholo wam unyanzelekile kwaye ufanelekile, ixesha elide. Inyani yokuba abanye abantu bachitha iiyure zabo zokulala 'belungiselela' izithuba zabo zeenjini iyandikhathaza.
Iiblogi zezentengiselwano zobuqu kunye neshishini, akukho okunye.
Ngokwenene ndingathanda ukwazi ngale nto yaseAmazon nangona ...
Jun 24, 2009 ngo-9:12 AM
Olunye ulwazi kwi Amazon S3. Ndityhala zonke iifayile zam zemidiya kwiAmazon ngoku kwaye iphucule kakhulu ukusebenza kwendawo yam.
Jun 24, 2009 ngo-8:32 AM
"Ukwenza uhlalutyo lwegama elingundoqo kwimigaqo efunwa ngabaphulaphuli bakho"
Usebenzisa ntoni ukwenza oku?
Jun 24, 2009 ngo-9:10 AM
Ndikhankanya isixhobo esikhulu apha ngasentla, SEMRush. Ikuvumela ukuba ubone indlela indawo yakho yezalathisi, kunye nokujonga amagama angundoqo, iziphumo eziphilayo kunye nomthamo wokukhangela. Unokuphonononga iindawo zokhuphiswano ukuze ubone ukuba ngawaphi amagama angundoqo abafumana kuwo itrafikhi. Indlela yasimahla kukusebenzisa Isixhobo segama elingundoqo esekwe kuGoogle kodwa ayikho njenge robust.
Jun 25, 2009 ngo-7:22 AM
Enkosi ngempendulo Doug.
Okt 23, 2009 ngexesha 2:14 AM
Kanye kwimali, uDoug. Oku akunzima ukukuqonda kwaye u-KA uvakala njengomntu oqaqambileyo. Ndiqinisekile ukuba sele beqalile ukuxhamla kwiingcebiso zakho ezicingisisiweyo.